5 Kunze kwe-In-The-Box Nzira dzekuvandudza SEO YAKO NeSocial Media - Insight From Semalt
Unoda here kuwedzera huwandu hwako muzvinjini?
Unofarira kushandisa shanduko yehuwandu kuwedzera SEO yako inoshanda here?
Zvemagariro evanhu ane ruzivo rwakanyanya pamigumisiro yako yekutsvaga, uye akujeka kwehupfumi hwevanhu kunogona kusimbisa nzvimbo yekutsvaga.
Mutsamba iyi, Jason Adler, Mutengi weKuchengetedza Muteereri we Semalt Digital Services, inopa nzira shanu, kuburikidza nazvo, iwe unogona kushandisa hutachiona hwehupfumi kuti uwedzere kutsvaga tsvakurudzo yako.
# 1: Simbisa mazano nehutano hwako hwemagariro evanhu
Kare, kusarudzwa kweGoogle kwaive kwakavakirwa pakuvakwa kwekubatana pasinei neunhu hwehutano munhu aive achifunga. Gare gare, Google yakatanga kufunga nezvehutano hwehutano mushure mekuziva kuti vanhuvakanga vari kushandura kutarisa kuburikidza nekushandiswa kwekubatana kwenhema - quadro girasoli.
Sezvo nzvimbo dzekugara dzevanhu dzakavakirwa pahutachiona hwehutaneti, hukama hwemasayithi ayainowanzoonekwa seyepamusoro. Kunyange munyaya iyo iwe une peji Facebook peji, ichave yakarongedzwa yakakwirira nekudaFacebook ine simba rakakwana.
# 2: Wedzera nhamba yevateveri vako
Zvivako zvine nhamba yakawanda yevateveri vepamusoro-soro zviri nani pakutsvagainjini. Vateveri vakakurukurwa vari pane zvemasangano enyu ezveshamwari, uye nhamba inokosha yevanhu ava vanobvumirana kana kupindadzimwe nzira.
Kukurukurirana kunogona kunge kwakagadzirisa retweeting yako yehupenyu, kudzokorora mapepa,kunyora kuongororwa paGoogle + kana kukutumira tweet..Sezvo zvakadaro, iva nechokwadi chokuti nhamba yevateveri vako iri kuwedzera zvishoma.
# 3: Iva nechokwadi chokuti zvinyorwa zvako zvinowanika uye zvinotsvaga
Nzvimbo yehupenyu yakadai sePinterest inoita kuti ruzivo rwako ruve nerwendo uyetsvaga. Nzvimbo yacho inokurudzira kugovana zvakanyanya. Vashandi vanotumira mapikicha evanofarira mapuranga avo uye vanozviparidzira kune vamwePinterest fans.
Semuenzaniso, unogona kuita zvinyorwa zvako pane Facebook zvakatsvaga mukutsvagainjini nokuenda kune Facebook privacy setting tab nekubvumira zvimwe zvinjini kutsanangurira nguva yako.
# 4: Iva nechokwadi chokuti zvinyorwa zvako zvinoshandisa keywords
Nheyo dzakakosha kunzvimbo yako, yakabhadhara kushambadzira mishandirapamwe, uye blog, uye naizvozvo,haifaniri kukushamisa iwe kuti mazwi makuru anokosha nehuwandu hwehupenyu hwako.
Pamusoro pePinterest, nzira yakasimba yokugadzirisa nzvimbo iri nani muzvinjinindeyekuita kuti mapurisa ako kana mapini ane mazwi makuru. Saizvozvowo, kuita tsvakurudzo kumavhidhiyo eYouTube kunogona kuwedzera ruvara ku blog,chiteshi, uye webhusaiti kana zvichisimbiswa purogiramu yako.
Kushandisa mazwi ekutsvaga pane yako Facebook zvigumisiro kunogonawo kuita kuti uve nani.
Mashoko ezvinyorwa anoona kuti zvinyorwa zvako zvinotsvaga uye kana vashandisi vachitsvaganokuda kwemashoko iwayo, zvinyorwa zvako zvichava zvekutanga kutanga.
# 5: Itai nzvimbo dzekunzvimbo
Iva nechokwadi chokuti urongwa hwako hunoenderana neGoogle + iyo ine yakodata yakakodzera nekero. Izvi zvichaita kuti vatengi vako varatidze sangano rako zvakananga paGoogle.
Kushandisa masayiti evanhu semakambani ekutengeserana inokurudzirwa zvikuru, asiinogona kunyanya kuwedzerwa mberi kuburikidza neververaging iyo kuwedzera SEO.
Munhu anogona kuva nechokwadi kuti nzvimbo dzekugara dzevanhu dzinogona kuvandudza mazinga.